महिनावरी हुँदा पेट देख्ने समस्याले हैरान हुनुहुन्छ ? छुटराका पाउन अपनाउनुहोस् यी घरेलु उपाय | स्वास्थ्य जीवनशैली
June 4, 2021 NepstokLeaveaComment on महिनावरी हुँदा पेट देख्ने समस्याले हैरान हुनुहुन्छ ? छुटराका पाउन अपनाउनुहोस् यी घरेलु उपाय
दुध स्वास्थ्यका लागि जति फाइदा जनक हुन्छ त्यति नै बेसारका पनि फाइदा छन्। दुध र बेसार मिसाएर सेवन गर्दा पाचन यन्त्र चुस्त रहनेदेखि महिनावारीमा हुने पेटको दुखाईसम्मको समस्या कम हुन सक्छ।
यदि तपाईलाई अनिन्द्राको समस्या छ भने बेसार र दुध पिउनु लाभदायक हुन्छ। बेसार मिसाइएको दुधमा ट्रायटोफन हुन्छ, जसले राम्ररी निन्द्रा लगाउँछ